ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖြန့်ဖြူးဝန်ဆောင်မှုရေနွေးငွေ့ဂိမ်းနွေရာသီရောင်းအား၏အစကြေညာခဲ့သည်။ ဇူလိုင်လ5သည်အထိလူတိုင်းလျှော့စျေးမှာလူကြိုက်များတဲ့ဂိမ်းစီမံကိန်းများကိုဆည်းပူးဖို့, ဒါပေမယ့်လည်းအသစ်သော Mini-ဂိမ်းအတွက်ဆုအနိုင်ရမသာနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ရေနွေးငွေ့အသုံးပြုသူရောင်း၏သင်တန်းအတွက်အတော်လေးသစ်ကိုခေါင်းစဉ်အဖြစ်အနိမ့်စျေးနှုန်းမှာဝယ်ယူရန်နှင့်အတိတ်နှစ်ပေါင်းလူကြိုက်များ hits ဆုံးရှုံးကြဘူးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
AsRock AMD ၏ပရိုဆက်ဆာအဘို့အ DeskMini A300 barebone-system ကိုပြင်ဆင်
အဆိုပါကုမ္ပဏီ AMD ၏ Ryzen ပရိုဆက်ဆာ၏ installation များအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ AsRock DeskMini A300 barebone-စနစ်, မိတ်ဆက်ပေးဖို့ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ အသစ်သောပစ္စည်းများအများအပြားဓာတ်ပုံများဂျပန်ယူနစ်ထုတ်လုပ်သူထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ AsRock DeskMini A300 AsRock DeskMini A300 AsRock DeskMini A300 အခြေခံ AsRock DeskMini A300 အထူးကျစ်လစ်သိပ်သည်း PC များအဘို့ဒီဇိုင်း chipset ကို AMD ၏ A300, matplata ပါလိမ့်မယ်။
တယ်လီကွန်းအော်ပရေတာ Impossible "နွေဦးရာသီဥပဒေ" စောဒကတက်ခဲ့ကြ
တိုင်းပြည်ကဒီရည်ရွယ်ချက်ပစ္စည်းကိရိယာများအဘို့အသတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရုရှားအော်ပရေတာ, အသွားအလာတွေကိုသိမ်းဆည်းဖို့ subscriber များအား obliging, တရားဝင် "ပညတ္တိကျမ်းနွေဦး၏" လိုအပ်ချက်နှင့်အတူလိုက်လျောနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဒီသတင်းစာ "Kommersant" အကြောင်း။ အဆိုပါထုတ်ဝေသည့်ဖက်ဒရယ်ဆက်သွယ်ရေးအေဂျင်စီ၏စာနယ်ဇင်းဝန်ဆောင်မှုအဆိုအရစမ်းသပ်ဓါတ်ခွဲခန်းဒေတာသိုလှောင်မှုသာဒီနှစ်ကုန်မှာကိုဆိုလိုသည်အတည်ပြုခွင့်ရှိသည်ပါလိမ့်မယ်။
Capcom စတူဒီယိုကိုပထမဦးဆုံးအောင်မြင်မှုတွေအကြောင်းကိုပြောထားသည် Resident Evil2ကိုပြန်လည်အသက်
ဂျပန် developer များ Resident Evil2ဇာတ်ကားစာရင်းဇယားလတ်ဆတ်သောထိတ်လန့် survayvl shared ။ စတိုးဆိုင်ရေနွေးငွေ့လွှတ်ပေးနေ့စွဲဂိမ်းအွန်လိုင်းတစ်ချိန်တည်းမှာထူးချွန်သောရလဒ်များကိုပြသ - ကျော် 55 တထောင်ကလူ .. Resident Evil2Valve Store မှာ Capcom စီမံကိန်းများကိုတို့တွင်ဒုတိယအအောင်မြင်ဆုံးပစ်လွှတ်ဖြစ်ပါတယ်။
Facebook ပေါ်မှာ paid အုပ်စုတစ်စုရှိပါတယ်
စာရင်းသွင်းမှာယူခြင်း - လူမှုကွန်ယက် Facebook တွင်အုပ်စုများမှငွေရရှိအောင်ဆောင်ရွက်အသစ်တစ်ခု tool ကိုစမ်းသပ်စတင်ခဲ့သည်။ အသိုင်းအဝိုင်းပိုင်ရှင်များ၏အကူအညီဖြင့်5မှ 30 ဒေါ်လာကနေပမာဏအတွက်မူပိုင်ခွင့်အကြောင်းအရာသို့မဟုတ်အကြံဉာဏ်ကိုရယူသုံးစွဲနိုင်များအတွက်လစဉ်ကြေးသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ပိတ်ထားသောလစာအုပ်စုများမတိုင်မီ Facebook ပေါ်မှာတည်ရှိနေပေမယ့်သူတို့ကတာဝန်ရှိသူတဦးက channel များကိုကျော်လွှား, လူမှုကွန်ယက်ကိုငွေဝင်နေကြသည်။
Electronic Arts တို့နှင့် BioWare ကိုယ်စားလှယ်များအရေးယူနိုင်ငံတော်သီချင်း၏ system ကိုလိုအပ်ချက်များကိုအကြောင်းကိုပြောနှင့်ပြီ။ အဆိုပါ PC အတွက်အခြေခံလိုအပ်ချက်များ၏စာရင်းသည် Windows 10. အများစုမှာဖွယ်ရှိပုံပေါ်, ဂိမ်း7နဲ့ 8 operating system ကိုအပေါ်ကို run ဖို့ငြင်းဆန်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါနိုင်ငံတော်သီချင်း၏ကျန်ထိပ်တန်းအဆုံး configuration ကိုတောင်းခံအဖြစ်သံမှဇီဇာကြောင်ခြင်းနှင့်မသည်။
HDMI, USB: အဘယျသို့ကွဲပြားခြားနားမှု
လူအားလုံးတို့သည်ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူများမီဒီယာနှစ်ခု connectors ရှိတယ်ဆိုတာကိုသိရ - HDMI, USB, ဒါပေမယ့်လူတိုင်းမ HDMI မှ USB အကြားခြားနားချက်ကဘာလဲဆိုတာသိတယ်။ အဘယ်အရာကို USB နဲ့ HDMI high-definition မာလ်တီမီဒီယာ Interface (HDMI) ဖြစ်ပါသည်မြင့်မားသောအဓိပ်ပါယျနှင့်အတူမာလ်တီမီဒီယာအချက်အလက်များ၏ဂီယာတစ်ခု interface ကိုဖြစ်ပါတယ်။ HDMI high-definition ဗီဒီယိုကိုထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ကူးယူခြင်းမှကာကွယ်ပေးရမည်ဖြစ်သောဒစ်ဂျစ်တယ်အသံအချက်ပြ, Multichannel အသုံးပြုသည်။
ကိုယ်စားလှယ်များ Blizzard စတူဒီယိုမုန်တိုင်းအင်ပါယာ၏သူရဲကောင်းများကနေအသစ်သောဇာတ်ကောင်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်မျှဝေပေးတယ်။ ဂိမ်းရဲ့စမ်းသပ်မှုဆာဗာကိုသူရဲကောင်းအပေါ်ဇန်နဝါရီလ2Diablo ၏ဝဠာကနေရောက်လာတယ်။ အဆိုပါကောင်းကင်တမန်မင်းအင်ပါယာ၏စွမ်းရည်များနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများအကြောင်းဇာတ်ကောင်ကျွမ်းကျင်မှုအနည်းငယ်သာသိပေမယ့်ယခုကစားသမားရှိနိုင်ပါဖော်ပြချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အင်ပါယာဖို့ထူးခြားတဲ့စွမ်းရည်ရှိပါတယ် "ခွန်အားအမည်းစက်။ "
အဆိုပါ Overwatch အသစ်တစ်ခုဇာတ်ကောင်
Blizzard ဟာ multiplayer အဖွဲ့သေနတ်သမားအခြားဇာတ်ကောင် Overwatch ဆက်ပြောသည်သိရသည်။ ဤအချိန်, ကစားသမားများရွေးချယ်ဖို့မရရှိနိုင်ပါဇာတ်ကောင်များစာရင်းကိုမှာကိုယ်ပိုင်တိုက်ခိုက်ရေးစက်ရုပ်စီမံခန့်ခွဲနေတဲ့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဟမ်းစတား Hammond ဟာခေါ် Taran, ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲဖြစ်သည်။ တရားဝင်သမိုင်းအဆိုအရ Hammond ဟာလအခြေစိုက်စခန်း "Horizon" ပေါ်တွင်ကောက်ယူစမ်းသပ်မှုတစ်ခု၏ရလဒ်အဖြစ်ထောက်လှမ်းရေးနှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောဟမ်းစတားပုံမှန်အတိုင်းအရွယ်အစားရရှိခဲ့သည်။
ဝိသေသလက္ခဏာများ, အမျိုးအစားများနှင့် USB 2.0 နှင့် 3.0 အကြားအဓိကကွဲပြားခြားနားချက်
ကွန်ပျူတာနည်းပညာ၏အရုဏ်မှာအဓိကပြဿနာများ၏တဦးတည်းမကောင်းတဲ့အသုံးပြုသူ device ကို compatibility ခဲ့ - ကိုဆက်သွယ်ထားသောအရံပစ္စည်းနှေးကွေးနေသေးတယ်နှင့်အနိမ့်ယုံကြည်စိတ်ချရဖြစ်လေ့အရှိဆုံးအရာများစွာကိုကွဲပြားခြားနားဆိပ်ကမ်းများ, ဖြည့်ဆည်းသည်။ ဒီဖြေရှင်းချက် "Universal Serial Bus" သို့မဟုတ်, တိုတောင်းသောအဘို့, USB အဖို့ဖြစ်တယ်။
Google Docs ၏ယိုစိမ့်အတွက်ပြဿနာတစ်ခုမမြင်ရပါဘူးအမျှ
Google ကကိုယ်စားလှယ်များ "Yandex" ၏ထုတ်ပေးရေးအတွက် Docs ဝန်ဆောင်မှုအနေဖြင့်စာရွက်စာတမ်းများတစ်ဦးထိခိုက်အတူအခြေအနေပေါ် commented ပါပြီ။ ကုမ္ပဏီ၏အဆိုအရ Google Docs ကိုမှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်တယ်နှင့်ကောင်းစွာဟက်ကာ site ကိုဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်တည်ခြင်းနှင့်မကြာသေးမီကယိုစိမ့် privacy ကို၏မမှန်ကန်ကြောင်း setting များကိုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအစီရင်ခံစာသည်အသုံးပြုသူများသူတို့ကိုယ်သူတို့သူတို့ကိုလူထုစေလျှင်ရှာဖွေရေးရလဒ်များကိုစာရင်းဇယားများတွင်သာလဲကျကြောင်းမှတ်ချက်ပြုထားသည်။
Oculus Rift ဖျက်သိမ်းအောက်ပါမော်ဒယ်မျက်မှန်ထုတ်ပြန်
ဒီဆုံးဖြတ်ချက်အားဖြင့်ကုမ္ပဏီသော့ချက် developer များထဲကတစ်ခု၏ Facebook ကိုစောင့်ရှောက်မှုတွန်းအားပေးနိုင်ပါတယ်။ အခြားနေ့, Facebook ကပိုင်ဆိုင်သည်ဖြစ်သော Oculus VR ၏ပူးတွဲတည်ထောင်သူ, Brendan Iribe ကုမ္ပဏီမှသူ၏ထွက်ခွာကြေညာခဲ့သည်။ ကောလာဟလများအရ, ဒီသည်၎င်း၏လက်အောက်ခံစတူဒီယိုထဲမှာ Facebook ကစတင်ခဲ့ကြောင်းပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးနှင့် virtual reality နည်းပညာ၏နောက်ထပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ် Facebook နှင့် Brendan Iriba ၏ခေါင်းဆောင်မှု၏အမြင်များကိုအခြေခံကျကျခွဲထွက်ရန်ဟူသောအချက်ကိုကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကစားသမား Assassin ရဲ့ Creed Odyssey ဇန်နဝါရီလအတွင်းအသစ်က content များအတွက်စောင့်ဆိုင်းနေ
Ubisoft စတူဒီယိုကိုယ်စားလှယ်များလာမည့်ဇန်နဝါရီ update ကိုအတွက် Assassin ရဲ့ Creed Odyssey ထဲမှာတီထွင်မှုနှင့် ပတ်သက်. မိန့်မြွက်တော်မူ၏။ developer များဟာလိမ်းအလုပ်များကိုဂိမ်းနှစ်ခုအခက်ထားပါ။ ပုံပြင်များတစ်ခုမှာလွှတ်ပေးရန်အတွက်ထွက်ပြီးသားဖြစ်တယ်, က "သမီးတို့ Lala-Roba" ဟုခေါ်သည်။ ဒါဟာအဆင့်ကို 13 ရောက်ရှိခဲ့ကြသူအသုံးပြုသူများရရှိနိုင်ပါသည်။
မိန်းမတို့အဘို့ရောမမြို့ II ကို: ဂိမ်းကစားစုစုပေါင်းစစ်ပွဲ rating ခေါ်ခဲ့
နောက်ဆုံးပေါ် patch ကိုသိသိသာသာရှေးခေတ်ရောမမွို့ရှိရာအရပ်ကိုကြာသောသမိုင်းဝင်ဂိမ်းထဲမှာအမျိုးသမီးစစ်ဗိုလ်ချုပ်များ၏အရေအတွက်သည်တိုးပွါးကြောင်းမပျော်ကစားသမား။ စုစုပေါင်းစစ်ပွဲမဟာဗျူဟာ: ရောမမြို့ II ကိုကို Creative Assembly ကိုစတူဒီယိုကနေလွန်ခဲ့တဲ့ငါးနှစ်သို့ရောက်လာသည်ကား, ဒါပေမယ့် developer များနေဆဲထိုသို့ပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများလွှတ်, ဂိမ်းထောက်ခံပါတယ်။
SteamVR အတွက်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်ကောင်းမွန်တစ်ခု update ကိုပြင်ဆင်နေ valve
Virtual reality အနည်းငယ်ပိုလက်လှမ်းလုပ်ပေးချင်တယ်။ HTC ကနှင့် တွဲဖက်. valve - ထုတ်လုပ်သူအချက်များ Vive virtual reality - ထို Motion တင်ပါသည် ( "ချောမွေ့လှုပ်ရှားမှုများကို") ဟုခေါ်ဝေါ်သောရေနွေးငွေ့နည်းပညာအတွက်မိတ်ဆက်ကြသည်။ ယင်း၏လုပ်ဆောင်ချက်၏နိယာမစွမ်းဆောင်ရည်၏ကျဆုံးခြင်းအတွက်သူမပျောက်ဆုံးနှစ်ခုသည်ယခင်သူတွေကိုပေါ်တွင်အခြေခံဘောင်နှင့် player ရဲ့လုပ်ရပ်တွေကို dorisovyvaet ဆိုတဲ့အချက်ကိုအတွက်ပါဝင်ပါသည်။
စုစုပေါင်းစစ်ပွဲ developer များပရိသတ်တွေ၏ဝေဖန်မှုများကိုတုံ့ပြန်
Developer များသမိုင်းဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာများစုစုပေါင်းစစ်ပွဲ: ရောမမြို့ II ကိုအမျိုးသမီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးများတစ်ဦးလည်းမကြာခဏဖြစ်ပျက်မှုအပေါ်ဂိမ်းပရိတ်သတ်တွေရဲ့အနုတ်လက္ခဏာတုံ့ပြန်မှုပေါ်တွင်မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါသည်။ မိမိအထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာစတူဒီယိုကို Creative ညီလာခံ, ကစားသမားခံစားချက်တွေကို subjective ဆန့်ကျင်ခြင်း, နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်များအတွက်အမြတ်ရခြင်းအမိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးများအဘို့အကြောင်းကျဆုံးခြင်းထွက်၏ရာခိုင်နှုန်းရရှိနိုင်မှတ်ချက်ချ, ပြောင်းလဲသွားတယ်မခံခဲ့ရပါဘူး။
ရုရှား router များ hacking ကနေအကာအကွယ်မဲ့ခဲ့ကြ
ယေဘုယျအားဖြင့်ရုရှားအင်တာနက်အသုံးပြုသူများ, ပေါ့ပေါ့တန်တန်သူတို့ရဲ့ router များ၏လုံခြုံမှုလျှောက်ထားခြင်းနှင့်ထိတွေ့ default settings ကိုပြောင်းလဲပစ်ချင်ကြဘူး။ ဒါကနိဂုံးချုပ် Avast အားဖြင့်ကောက်ယူသုတေသနရလဒ်များအနေဖြင့်အောက်ပါအတိုင်း။ တစ်ဦးသည် router ၏ဝယ်ယူ hacking ထံမှ secure နိုင်ရန်အတွက်ထုတ်လုပ်သူရဲ့ login နဲ့ password ဖြင့်အစားထိုးခဲ့ပြီးနောက်စစ်တမ်းအဆိုအရရုရှား၏ထက်ဝက်သာ။
လျှို့ဝှက်ဒေတာကို Google Docs အသုံးပြုသူများပွင့်လင်း access ကိုဝင်တိုက်
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် "Yandex" အညွှန်းကိန်းမှဝင်ရောက်ခွင့်လျှို့ဝှက်သတင်းအချက်အလက်င်စာရွက်စာတမ်းများထောင်ပေါင်းများစွာ၏ထည့်သွင်းရန်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သည့်ဝန်ဆောင်မှုကို Google Docs, ရဲ့ contents စတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ရုရှားရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏ကိုယ်စားလှယ်များအညွှန်းဖိုင်တွေ password ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း၏မရှိခြင်းအတွက်ပေါ်ထွန်းခွအေနအေကရှင်းပြတယ်။ Google Docs စာရွက်စာတမ်းများအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအနည်းငယ်ကြေးနန်း-Channels တသတိထားမိကြောင်းအတွက် "Yandex" ဇူလိုင်လ4ညနေပိုင်းတွင်များ၏ပြဿနာအတွက်ထင်ရှား။ ,
ဘရာဇီးအတွက်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲဟာဗီဒီယိုဂိမ်းထဲမှာထင်ဟပ်လျက်ရှိသည်။ ထိုသို့အကောင်းဆုံးမဟုတ်ပါဘူး။ ဘရာဇီးအာဏာပိုင်များ6အောက်တိုဘာလအပေါ်ရေနွေးငွေ့အပေါ်ဖြန့်ချိ Bolsomito 2k18 လို့ခေါ်တဲ့ဂိမ်းတွေနဲ့မပျော်ဖြစ်ကြသည်။ ဘရာဇီးယာဣ Bolsonaru ၏သမ္မတသက်တမ်းများအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏အခန်းကဏ္ဍအတွက်ကစားသမား (သူ၏အမည်, သင်တန်း၏, ဖော်ပြဖော်ပြထားပါဘူး, ဒါပေမယ့်ဂိမ်းအမည်သူ့ဟာသူအဘို့ပြောတတ်တာဖြစ်ပါတယ်) ၏တိုင်းပြည်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့ရာအရပ်ဒါဟာ bitemap "ကှနျမွူနစျဆိုးယုတ်သော။ "
Bethesda ထပ်မံကျ 76 အတွင်းလိမ်လည်ကစားသမားလျော်ကြေးပေးဖို့ကြိုးစားနေ
အဆိုပါ duffel အိတ်များအတွက် In-ဂိမ်းငွေကြေး bit ။ ဂိမ်းကစားဒါမပျော်ထပ်မံကျ 76, ယခု neposredtvenno ဂိမ်းကျော်လွန်ပြီသူကိုအသုံးပြုသူများအနေဖြင့်ကြုံတွေ့နေရသောပြဿနာ။ Bethesda ဆိုင်အတွက် $ 200 အထူးသဖြင့်တစ်ဦးကင်းဗတ် duffel အိတ်များ, ထုတ်ဝေပါဝါလက်နက်ရောင်းချပါတယ်။